Induction Heating Theory neTekinoroji, chii chinonzi kupisa
Induction Heating haina murazvo, isina-yekudyidzana nzira yekupisa iyo inogona kushandura yakanyatsotsanangurwa chikamu chesimbi bar cherry tsvuku mumasekondi, kana kuchinjisa ikozvino kuyerera mune induction coil, kusiana kwemagetsi emagetsi induction kumisikidzwa kwakatenderedza coil, kutenderera ikozvino ( inosundirwa, yazvino, eddy yazvino) inogadzirwa mune yekushandira (inoitisa zvinhu), kupisa kunogadzirwa sezvo eddy yazvino ichiyerera ichipesana nehukama hwechinhu.
Induction Kutya inokurumidza, yakachena, isina kusvibisa sutu yekudziya iyo inogona kushandiswa kupisa simbi kana kushandura inodzika midziyo zvinhu. Iyo coil pachayo haina kupisa uye iyo yekudziya maitiro inodzorwa. Iyo solid state state transistor tekinoroji yaita kuti induction ichenese nyore, kupisa-kupisa kupisa kwezvirongwa induction brazing, kupisa kupisa, kupinza induction, kupwanya kwakakodzera, induction yekuumba nezvimwe.
Yakanyatsogadzirirwa induction coils akabatana pamwe ine simba uye inoshanduka induction simba magetsi inogadzira inodzokororwa mhedzisiro yekupisa yakanangana kune chaunoda application. Induction simba zvigadzirwa zvakagadzirirwa kunyatso kuyera zvinhu zvinopisa uye kupindura kune echinhu's pfuma shanduko panguva yekupisa kutenderera inoita kuti uwane akasiyana maficha ekupisa kubva kune imwechete yekupisa kunyorera chaiko.
Chinangwa che induction heat zvinogona kunge kuomesa chikamu kudzivirira kupfeka; gadzira iyo purasitiki yesimbi yekugadzira kana inopisa-kuita mukati mechimiro chaunoda; braze kana mutengesi zvikamu zviviri pamwechete; nyungudika uye sanganisa izvo zvinopinda izvo zvine yakakwirira-tembiricha alloys, zvichiita injini dzejeti. kana yenhamba ipi neipi yezvimwe zvikumbiro.